Maxay tahay in adeegaha loo dhigo qolka kumbuyuutarka? - Goldenor Elektaroonigga Teknolojiyada Co., Ltd.
Hoyga > Wararka > Warka Warshadaha > Maxay tahay in adeegaha loo dhigo qolka kumbuyuutarka?
Maxay tahay in adeegaha loo dhigo qolka kumbuyuutarka?
Haddii degelku si caafimaad leh u kori karo iyo haddii kaleba, waxaa si gaar ah muhiim u ah in la doorto booska adeegga ku habboon, taas oo sidoo kale ah mawduuc caan ka ah warshadaha. Halkan waxaa ku yaal sharaxaad kooban oo ku saabsan dhinacyada loo baahan yahay in la tixgeliyo markii la dooranayo server, si markaa kuwa cusub ay u aqoonsan karaan sida ugu dhakhsaha badan. Sida loo doorto server waxaa laga tixgelin karaa afar dhinac: caafimaadka serverka, xasiloonida, xawaaraha helitaanka, iyo taageerada howlaha:
(1) Caafimaadka serverka Caafimaadka serverka la sheegay
halkan waxaa inta badan laga tixgeliyaa degellada kale ee wadaaga isla shabakadda IP-ga serverka. Bogagga internetka qaarkood ee isla server-ka ah iyo isla qaybta shabakadda IP-ga ayaa hoos loo dhigay sababo la xiriira isticmaalka qishka hat madow. Xaq, haddii websaydhkaagu sidoo kale ku jiro serverkan waqtigan, xitaa haddii aadan isticmaalin habab khiyaamo ah oo aanad haysan diiwaanno xun, waxaa laga yaabaa inaad si qoto dheer uga qaybgasho isla markaana hoos loo dhigo isla waqtigaas. Waxaa jiray kiisas noocan oo kale ah horay. Isla markiiba sawir deg deg ah oo had iyo jeer caadi ahaa ayaa dib ugu soo noqday bil ka hor oo ka mid noqoshadiisu waa fadhiid. Kadib markaan hubiyo iskuxirayaasha banaanka ee shabakada iyo waxa kujira shabakada si loo hubiyo inaysan dhibaato jirin, qaar ka mid ah hababka koofiyadaha madow guud ahaan waxaa loo isticmaalaa in si deg deg ah lagu gaaro himilada, taas oo ah Ciqaabta ugu fudud. Sidaa darteed, markaan dooranayno server-ka websaydhka, waa inaan hubinno in IDC ay oggoshahay in la dhigo websaydhka noocan ah, oo la hubiyo inay jiraan noocyo bogaggan oo kale ah oo ku jira qaybta shabakadda IP-ka ee la iibsan doono iyo inay jiraan tiro aad u tiro badan oo degello leh waxaa lagu ganaaxay hoos u dhigid. Websaydh u gaar ah ayaa si qoto dheer loogu lug leeyahay.
(2) Xasiloonida adeegaha ayaa sidoo kale aad muhiim ugu ah xasiloonida serverka. Haddii inta badan serverkaaga aan la furi karin seddexdii ilaa shantiiba, waa inuu dhabarjab weyn ku noqdaa websaydhka. Had iyo jeer waxay u muuqataa marka caaro mishiinka raadinta ay gurguuranayaan websaydhkaaga. Si lama filaan ah oo aan u gurguurto, tani waxay hubaal ka dhigeysaa shabakadaada inaysan aaminin matoorada raadinta, taas oo si weyn u yareyn doonta gurguurta iyo gurguurashada caarada mashiinka raadinta, sidaa darteed ka mid noqoshada bogagga websaydhka ayaa hubaal saameyn ku yeelan doonta, gaar ahaan loogu talagalay bogagga cusub ee aan lahayn miisaanka, makiinadaha wax lagu raadiyo ayaa had iyo jeer ka fikiri doona in websaydhkaagu aanu diyaar ahayn, ama xitaa u malaynayso inaad xidhay boggaaga. Waxaan horey u isticmaalay xoogaa meel bannaan oo bilaash ah, xaaladdanna badanaa way dhacdaa. Websaydhka lama furi karo muddo saddex maalmood ah dhaqsona looma xallin karo, markaa degelku wuxuu ku hadhayaa oo kaliya bogga hore, isla markaana degelku wuxuu ku soo laabtay dhowr bilood ka hor, Weli ma uusan soo kaban oo waxaa ku jira kaliya 3 bog. Sidaa darteed, markaan doorano booska, ma iibsan karno wax raqiis ah. Waa inaan tixgelino xasiloonida martida oo aan eegno sumcadda. Waxaa ugufiican in la helo mudo tijaabo ah.
(3) Xawaaraha helitaanka adeegaha
Si looga fogaado dhibaatada xareynta boggaga, milkiileyaal badan oo gudaha ah ayaa doorta martida dibedda si ay u dhigaan boggooda internetka. Xawaaraha furitaanka ee meelo badan oo server ka liita ee Shiinaha runtii aad ayuu u gaabiyaa. Tani waxay si daran u saameyneysaa khibrada isticmaale ee websaydhka. Markaan fureyno Marka jawaabta bogga ay aad u gaabis tahay, waxaan inta badan doorannaa inaan si toos ah u xirno websaydhka, taas oo si weyn u kordhineysa heerka soo kabashada ee bogga. Isla mar ahaantaana, markay caaro mashiinnada wax baadha ay u yimaadaan inay gurguurtaan boggeena, waxay booqdaan degelkeenna booqde ahaan. Haa, markay caaro-gurguurashadu boggeeda xannibto, way quusan kartaa oo way joojin kartaa inay gurguurto. Waqtigaan, ka mid noqoshada degelkeena sidoo kale saameyn ayey yeelan doontaa. Hadafka ugu dambeeya ee matoorada raadinta ayaa ah in loogu adeego adeegsadayaasha, iyo xawaaraha helitaanka oo gaabis ah wuxuu kordhiyaa heerka soo kabashada. Degelku xaqiiqdii waa mid aan fiicnayn. Sidaa darteed, markaan doorano booska adeegaha, waa inaan doorannaa meel tayo sare leh oo leh xawli dhaqso ah.
(4) shaqada taageerada server
Taageerada adeegga sidoo kale waxaa ku jira dhinacyo badan, dabcan, inta ka sii dhameystiran ayaa ka sii fiican, haddii la taageerayo url ma guurto ah waa shaqo aad u muhiim ah, labada Linux ama daaqadaha martida loo yahay ayaa martigelin kara qaabkan, Sameynta shaqo wanaagsan ee URL-ka ayaa sidoo kale aad u waxtar u leh SEO. Isla mar ahaantaana, martida qaar ayaa sidoo kale taageeri doona 301 dib u habeyn iyo 404 bog, oo si toos ah loogu dejin karo asalka martida, taas oo aad ugu habboon in la isticmaalo. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ogaanay in qaar ka mid ah martigaliyayaashu aysan taageerin diiwaanada serverka. Tani naguma fiicna inaan fahanno xaaladda websaydhka. , Waxaa ugu wanaagsan in la doorto waxa la taageeri karo. Sidan oo kale, waxaan ku fahmi karnaa xaaladda saxda ah ee websaydhka annaga oo hubinayna log serverka.
Iskusoo wada duuboo, meel wanaagsan oo server ah ayaa saameyn weyn ku leh websaydhka. Meel xasilloon ayaa u oggolaan karta websaydhka inuu si joogto ah oo isdaba joog ah u horumariyo. Meel tayo-yar ayaa laga yaabaa inay ka dhigto dadaalladaadii hore mid aan micno lahayn, sidaa darteed waxaan dooranaynaa booska adeegga Waa inuu noqdaa mid feker leh.
Hore:Warbixinta cilmi baarista waxay sheeganeysaa in silsiladda warshadaha gudaha ee Shiinaha si tartiib tartiib ah loo aasaasayo
Xiga:Sida loo doorto shaashadda serverka oo leh waxqabad wanaagsan